Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | AIRTOX
Taariikhda ugu dambeysay - 10.03.2020
Anaga, AIRTOX® Industries A/S, qaaskaaga qaaska u tixgal. Waxaan had iyo jeer ku dadaaleynaa inaan ilaalino macluumaadkaaga shakhsiyeed sida ugu fiican ee ugu macquulsan oo aan u hogaansanno qawaaniinta ilaalinta macluumaadka ee la adeegsan karo. Nidaamkaan qarsoodiga ah, waxaan dooneynaa inaan kugu wargalinno sida xogtaada shaqsi ay u maareyn doonto AIRTOX.
Kumaa aruurinaya xogtaada shakhsi ahaaneed yaase xukuma xogta?
Maamulaha macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee aad noo soo gudbiso adigoo adeegsanaya boggeena internetka iyo foomamka internetka, waa shirkadda deenishka AIRTOX Industries A/S. AIRTOX wuxuu kaloo mas'uul ka yahay macluumaadkaaga shakhsiyeed sida uu qabo sharciga ilaalinta macluumaadka la adeegsan karo.
Shirkadaha ayaa iska diiwaangelinaya: CVR - Det Centrale Virksomhedsregister '
Lambarka CVR: 36467614
Lambarka diiwaangelinta VAT: DK36467614
Xagee ayaan ku kaydineynaa xogtaada yaana kala wadaagnaa?
Xogta si amaan ah ayaa loo keydiyaa daruuraha iyo adeegayaasha bixiyeyaashayada adeegga iyo alaab-qeybiyeyaasha, kuwaas oo u shaqeynaya oo adeegsanaya macluumaadkaaga annaga oo wakiil kaa ah si aannu u siino Adeegyada oo nooga gargaaraan howlaheena ganacsi sida (socodsiinta lacagahaaga, bixinta adeegga macaamiisha, ama marti-gelinta). Shirkadahaan waxaa loo oggol yahay inay adeegsadaan macluumaadkaaga shakhsiyeed keliya sida loogu baahan yahay oo keliya si ay u bixiyaan adeegyadan.
Sidee loo isticmaali doonaa macluumaadka shaqsiga ah?
Waxaan u isticmaali doonnaa xogtaada shaqsi si aan kuugu soo dirno wargeysyo, dalabyo suuq-geyn, casuumaad munaasabado ah iyo xogururinta macluumaadka annaga oo adeegsanayna e-mayllada, sidoo kale waxaan u xayeysiin doonnaa xayeysiintayada iyadoo loo eegayo danahaaga. Waxaan sidoo kale u adeegsan doonnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee aan kula soo xiriirno oo ku saabsan foomamka amar-bixinnada oo aan uga jawaabno farriimahaaga oo aan u bixinno adeegyada taageerada macaamiisha annagoo adeegsanayna emayl, fariin qoraal ah ama taleefan wicitaan ah.
Xogta noocee ah ayaa la soo aruurinayaa oo la baarayaa
Xaaladda markaan ururin karno xogtaada waxay noqon kartaa kuwa soo socda:
waxaad ka buuxisay foomka xiriirka boggayaga internetka,
waxaad iska diiwaan gelisay warsidayaasha shabakadayada,
waxaan isdhaafsanay macluumaadka xiriirka marka lagu gudajiro munaasabadaha gaarka ah (tusaale carwada),
Ballan ayaad nagala ballantay,
waad buuxisay cabasho,
waxaad buuxisay foom amar-horaysi ah si aad u iibsato kan cusub AIRTOX kabaha.
Waxaan soo aruurin doonnaa xogta soo socota:
lambarka taleefanka iyo / ama cinwaanka emaylka,
wadanka aad dagantahay,
cinwaanka shaqada (haddii lagu dabaqi karo),
magaca shirkadda (haddii lagu dabaqi karo).
AIRTOX Websaydhku wuxuu kaloo ururiyaa macluumaad shaqsi aan lagu aqoonsanin nooca ay daalacashada websaydhada iyo adeegayaashu sida caadiga ah u diyaariyaan, sida:
iyo taariikhda iyo wakhtiga dalabka booqda kasta,
goobta juquraafi ahaan.
AIRTOX websaydhku wuxuu adeegsanayaa Google Analytics laakiin waxaan isticmaaleynaa cinwaanno cinwaanno IP ah, sidaa darteed wax xog shaqsiyadeed ah lagumasoo qaadin.
AIRTOX websaydhku wuxuu adeegsanayaa xayeysiinta Google Xayeysiinta iyo adeegga dib-u-soo-iibsiga si loogu xayeysto bogagga saddexaad. Waxaan u isticmaalnaa si aan ugu xayeysiinno booqdeyaasha hore ee bartayada si ay tusaale ahaan u arki karaan alaabo cusub ama ay ugu soo laaban karaan howlihii aynan dhameyn. Xayeysiintu waxay noqon kartaa qaab qoraal ah bogga natiijooyinka raadinta Google ama qaab boodhadhka boggaga shabakadaha Google Display.
AIRTOX Websaydhku waxay adeegsanayaan Facebook PIXEL si ay ula socdaan taraafikada bogga, u abuuraan dhagaystayaal dib ugala soo xiriira Facebook, ama kala socda sheekooyinka Facebook.
Dhamaan howlahaas iyo kuwa intaa ka badan, AIRTOX isticmaalka bogga cookies, feylasha xogta yar ee kaydiya kombiyuutarkaaga. Haddii aad xiisaynayso waxa cookies ma isticmaalnaa ama sida loo diido inaan isticmaalno, fadlan booqo Cookies Siyaasadda.
Waa maxay aasaaska sharciga ah ee lagu baarayo xogta?
Ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiyeed waxay ku saleysan tahay ogolaanshahaaga markii aad aqbasho inaad hesho warsideyaasha ama aad oggolaato in nala soo xiriiro.
Bixinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waa iskaa wax u qabso, laakiin ma awoodi doonno inaan ku siinno adeegga warsidaha ama kula soo xiriirno la'aanteed xogtaas.
Mudo intee leeg ayaa xogta lagu kaydinayaa?
Waxaan u hayn doonnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed wargeysyada, dalabyada suuq geynta, sahaminta macluumaadka iyo macluumaadka xiriirka illaa aad kala noqoneyso oggolaanshahaaga
Waxaad leedahay xuquuqaha.
Goor kasta waxaad xaq u leedahay inaad codsato macluumaad ku saabsan macluumaadkaaga shakhsiyeed ee aan keydinno iyo socodsiinno. Waad la xiriiri kartaa AIRTOX waxaanan kugu siin doonaa macluumaadkaaga shakhsiyeed emayl.
Haddii macluumaadku khaldan yahay, waxaad xaq u leedahay inaad codsato sixitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed. Tan waxaa sidoo kale ku jira xuquuqda in la soo buuxiyo macluumaad shaqsiyeed oo aan dhameystirnayn.
Xuquuqda in la tirtiro, xuquuqda in la iloobo
Waxaad xaq u leedahay in aad tirtirto mid ka mid ah macluumaadkaaga shaqsiyeed ee aan kaa aruurinay waqti kasta. Waxaan tirtiri doonnaa xogtaada shaqsi haddii ay dhacdo inaad la noqotid oggolaanshaha ku saabsan hawlgalkiisa ku saleysan.
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato AIRTOX si loo xakameeyo socodsiinta macluumaadkaaga shaqsiyadeed gaar ahaan marka mid ka mid ah waxyaabaha soo socdaa uu u muuqdo:
waxaad la tartami doontaa sax ahaanshaha macluumaadkaaga shaqsiyeed, in muddo ah oo noo suurta gelinaysa inaan xaqiijinno sax ahaanta xogtaada shaqsiyeed,
habeynku waa sharci darro oo waxaad ka soo horjeedaa ciribtirka macluumaadka shakhsiga waxaadna codsan doontaa xaddidaadda isticmaalkooda,
mar dambe uma baahnaan doonno xogtaada gaarka ah ujeeddooyinka la xiriira, laakiin waxay kaaga baahan doonaan sameynta, jimicsiga ama difaaca sheegashada sharciyeed,
waad diidi doontaa AIRTOX u socodsiinta iyada oo la raacayo Qodobka 21 (1) ee qaanuunka ilaalinta xogta guud ee EU-da ee 2016/679 (GDPR), iyadoo la sugayo xaqiijinta in sababaheena sharciga ah ay ka gudbeen kuwaaga,
Waqti kasta, iyadoo ku saleysan ogolaanshahaaga, waxaan u hawlgalineynaa macluumaadkaaga shaqsi hab otomaatig ah, waxaad xaq u leedahay inaad hesho koobiga macluumaadkaaga. Tan waxaa ku jira macluumaad shakhsiyeed oo aad na siisay oo keliya. Waxaan kuu soo diri doonaa macluumaadkaaga shakhsiyeed qaab, qaab caadi ah oo loo adeegsado iyo mashiinka lagu akhrin karo. Waxaad xaq u leedahay inaad u gudbiso xogta qof saddexaad.
Waxaad xaq u leedahay inaad diido ka baaraandegida macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ku saleysan AIRTOX dano sharci ah. Kama sii wadi doonno howsha macluumaadka shakhsiyeed ilaa aan ka muujin karno sabab sharci ah oo ku saabsan nidaamka kaas oo ka gudbi doona dantaada iyo xuquuqdaada ama sheegashada sharciga ah darteed.
Waxaad xaq u leedahay inaad diido toosinta suuq geynta, oo ay kujirto falanqayn xirfad u sameynta ujeedooyin suuqgayn toos ah. Xaaladdan oo kale ma sii wadi doonno macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Xaqa aad u leedahay inaad ka dacwooto hay'ad kormeer
Haddii aad noo tixgaliso inaan u hawlgalno xogtaada shakhsiyeed hab jebinaysa qawaaniinta GDPR, markasta waad nagala soo xiriiri kartaa arrintan. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad cabasho u gudbiso hay'adda kormeerka.
Sideed ugu gudbi kartaa xuquuqahaaga?
Markasta oo aad rabto inaad nala soo xiriirto oo ku saabsan xogtaada shaqsiyeed ee aan soo uruurino oo aan socodsiinno, fadlan nala soo xiriir adoo u diraya cinwaanka e-maylkan [Email ilaaliyo]
Adeegyada iyo ganacsigayagu way is beddali karaan waqti ka waqti. Natiijo ahaan, waqtiyada qaar waxaa lagama maarmaan ah in aan isbeddel ku sameyno Nidaamkan Asturnaanta. AIRTOX waxay xaq u leedahay inay cusboonaysiiso ama wax ka beddesho Nidaamkan Asturnaanta wakhti kasta iyo waqti ka waqti. Waxaan kugu ogaysiin doonnaa e-mayl ahaan (oo loo diray cinwaanka e-maylka lagu caddeeyay rukunkaaga) ama annaga oo ku ogeysiinna ogeysiis ku yaal Bartan wixii isbeddel ah ee ku yimaadda Xeerka Asturnaanta. Fadlan dib-u-eeg siyaasadan si xilliyeed ah, iyo gaar ahaan ka hor intaadan bixin Macluumaad Shaqsiyeed. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay taariikhda kor ku xusan. Adeegsigaaga joogtada ah ee Adeegyada ka dib isbeddel kasta ama dib-u-eegis lagu sameeyo Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu tusi doonaa heshiiskaaga shuruudaha siyaasadaha asturnaanta oo la baddalay.